Nhau - Saizi Kuderedza Tekinoroji - Bvunzurudzo: "Digitization Inoita Yakakwirira Kujekesa"
Getecha Managing Director Burkhard Vogel nezve Industry 4.0 mu Granulating Technology Mune akawanda mapurasitiki ekugadzirisa indasitiri zvikamu, kubatanidzwa-zvine chekuita nekubatanidzwa kweiyo granulation tekinoroji mujekiseni yejekiseni, extrusion, yekuvhuvhuta kuumba uye thermoforming mitsara iri kufambira mberi nekukurumidza. Iyo granulator inogadzira Getecha yakapindura kune ino maitiro padanho rekutanga uye ikozvino inoshongedza iyo hopper uye infeed granulators yeayo "RotoSchneider" akateedzana neakawanda akangwara mashandiro maererano neIndasitiri 4.0 maitiro. Managing director Burkhard Vogel anotsanangura mubvunzurudzo zvakakosha.
Mr.Vogel, zvakakosha zvakadii kugadzirirwa kweGetecha granulators nemaindasitiri 4.0 mashandiro parizvino einjiniya dzako dzebudiriro? Burkhard Vogel: Pamusoro peiyo inoenderera ichangoburwa michina yekumisikidza iyo yepakati mashandiro ezvikamu zvei rotors, yekucheka mukamuri pamwe neiyo infeed uye dis- kuchaja masisitimu, kuvandudzwa kweinobatsira Indasitiri 4.0 mafungidziro eedu magranulators awana. yakakosha mukukosha, kunyanya mumakore matatu kusvika mana apfuura. Izvi zvinoshanda kune zvakateedzana nezvidiki uye zvakaomeswa padivi pemuchina wekudhindisa granulator pamwe nekumahombekombe epakati epakati uye maiguru einfeed Iwe unofunga chii chiri chinhu chakakosha pano? Vogel: Kunyangwe iwe uchifunga nezve indasitiri yemotokari nevatapi vayo, kugadzirwa kwezvinhu zvekurongedza kana chikamu hombe chezvigadzirwa zvevatengi - mumaindasitiri ese chishuwo chekuenderera pachayo chiri kusundira padhijitari yezvigadzirwa zvekugadzira. Iko kuzadzikiswa kwezvivakwa zvinoenderana nematanho eIndasitiri 4.0 hakumire paminda yezvinhu zvinogadzirisa uye tekinoroji tekinoroji. Mainjiniya edu akacherekedza izvi makore akati wandei apfuura, kuitira kuti isu takatokwanisa kuvaka ruzivo rwakakura munzvimbo ino uye tave kukwanisa kushongedza magurufura edu eRotoSchneider neruzivo rwakasiyana ruzivo uye maficha ekutaurirana.
These ndidzo indasitiri 4.0 dzinoshanda panguva ino yezvikamu zvakajairika zvemidziyo yegranulators? Vogel: Kwete mune zvese zviitiko. Maindasitiri 4.0 mashandiro anongopinda mukutarisa kwemutengi kana iye achida kusanganisa tekinoroji tekinoroji mune ake anonyanya kushandisa maitiro epurasitiki kugadzira. Kana izvi zvikaitika, ruzivo uye kutaurirana tekinoroji kubatanidzwa kwema granulators muchirongwa chekugadzira tekinoroji kunoita basa repakati, kuitira kuti kugona kwavo uye kuwanika kwavo kugonewo kuchengetedzwa padhijitari. Iwe unogona here kunyatso tsanangura nezve ichi chikamu? Vogel: Fungidzira purasitiki processor ine chinangwa chekubaya imwe kana kunyangwe akati wandei wepakati pedu kana padivi pe-iyo-yekudzvanya granulators mune yake yekuyerera inoyerera uye otomatiki zvigadzirwa zvekugadzira vachishandisa conveyor mabhandi, kudzikamisa zvishandiso, zviteshi zvekuzadza uye mamwe maratidziro ehurongwa, mu odha kudzosera zvisaririra uye marara kugadzirwa kuburikidza neyakagadziriswa matunhu nenzira yekuchengetedza zviwanikwa. . chikamu chepurojekiti yakadaro, akasiyana maIndustry 4.0 maficha mune edu granulators anogona kupa akakosha masevhisi. Izvi zvinodaro nekuti haingotsigire inoenderera sisitimu yekumisikidza, asi zvakare inoshandisa kuvimbiswa kwemhando yepamusoro, inobvumidza maitiro-anofambidzana nekutarisa uye inogona kuvandudza zvakanyanya kuwanikwa kwekugadzirwa kwetambo. Ndeipi indasitiri 4.0 mashandiro anofanirwa kugadzirirwa granulator mune chero zvazvingaitika? Vogel: Izvi zvinosarudzwa zvichienderana nezvinodiwa zvekongiri zveprojekiti uye zvinangwa zvemutengi. Zvinhu zvakawanda zvava kuitika nekuti tinoshandisa mikana yakawanda yesensu yazvino uye tekinoroji yehunyanzvi pamwe neakawanda masisitimu emabhazi emumunda. Nenzira iyi maitiro mazhinji akakosha nedhata remuchina dzinogona kutorwa, kunyorwa, kugadziriswa, kuongororwa uye kuongororwa. Iwe une muenzaniso unoratidza weizvi here? Vogel: Kana chinjana chekuchinjisa pakati pegranulator neyekugadzira tambo chakagadziriswa, zvese zvimiro, zviito uye kukanganisa zviitiko zvinogona kurekodwa uye kupihwa. Zvichienderana neizvi, mamiriro ezvinhu akaomarara anogona kutaurwa nematanho akatsanangudzwa kune epamusoro- chikamu chirongwa chekudzivirira, icho chinobva chatangisa matanho akakodzera ekugadzirisa uye ekugadzirisa pakutanga. Uye zvakare, zvinokwanisika kunyora zvese zvinogadzirwa-zvinoenderana mashandiro eparamende uye zvinhu zvakakosha manhamba egranulator - senge kuburitsa kana hunhu hwezvinhu zvepasi - uye kuzvitumira kuOinating Data cquisition kana Major Diagnostic Chikamu sys - tems yepurasitiki processor yekuwedzera kuongorora. Izvi zvinoshandawo kunguva dzekumhanya, simba rekushandisa, peaks yekuita uye mamwe akawanda ma parameter kubva mukushanda kwema granulators. Tinogona zvakare kuronga kuti ese mameseji mameseji anofambiswa kune inomiririra komputa uye yakachengetwa ipapo kuitira ongororo uye zvinyorwa. . ll izvi zvinogadzira kushanduka kwakanyanya pamusoro pekuita kwesystem system. Saka mushandi wemiti anogamuchirawo dhata pamusoro pekuitwa kweakakosha maitiro uye hunatsiridzwa- hunhu? Vogel: Ndizvozvo. Pasina padiki nekuti chikamu chemashoko chakaburitswa kuburikidza nekuchinjana kwemasaini pakati peiyo yekugadzira uye iyo granulating chirimwa iripowo kune Indasitiri 4.0 mashandiro, ayo anogonesa iyo inonzi inonzi Predictive Monitoring uye kuwedzera kuwanikwa kwezvirimwa. Semuenzaniso, rwakawanda ruzivo rwakaunganidzwa runogona kugadzirirwa rwekufungidzira kuchengetedza uyezve yozotorwa neGetecha yekushandisa kure yekuchengetedza. Nechinangwa ichi, magranulators anogona kubatanidzwa uye kubatanidzwa mune yevatengi yeMRO zvivakwa. Ruzivo rwunowanikwa kubva izvi zvakare runoyerera kuenda kumatambudziko ekutarisisa yeiyo yakasanganiswa "bhuku" reGetecha granulators. Iyo tenzi yekudzvanya sisitimu yekugadzira muchina inogona kuratidza aya ruzivo kune anoshanda. Ndeapi chaiwo maindasitiri 4.0 mapurojekiti ari kuwanikwa naGeecha parizvino? Vogel: Ehe, aya mapurojekiti ari kuenderera nevatengi, uye ini handigone kuburitsa zvakawanda pamusoro pavo. Asi ini ndinogona kukuudza kuti kunyangwe iri nezve marara kubva mukuburitswa kwemapumburu eprostylene machira, zvikamu zvisina kumira zvakanaka kubva ku thermoforming yecof- fizi makapisi kana mativi ekumusoro kubva mukugadzirwa kwemafirimu - munzvimbo zhinji maGetecha granulators ane Indasitiri 4.0 mashandiro izvozvi chikamu chakamisikidzwa chemitsetse yekugadzira. Digitalisation - pamusoro pekusarudzwa kwema rotor akakodzera, madhiraivha, ma hopper uye zvimwe zvinhu zvakawanda - iko zvino chave chinhu chakakura mukugadzirwa kwevatengi kwema granulators edu. . nd isu tinotarisira kuti nyaya iyi icharamba ichiwana kukosha mune ramangwana
KEPT MACHINE inyanzvi yekutengesa yekugadzira mutsara mumunda wepurasitiki extrusion indasitiri.
Isu tinobatsira fekitori revatengi kuvandudza yavo PVC Extruder kugadzirwa uye chigadzirwa.
Post nguva: 2021-03-04